२०३० सम्ममा नेपालीको प्रतिब्यक्ति आय २५०० डलर पुर्याउने लक्ष्य, ३ नं. प्रदेशमा देशकै धेरै उद्योग | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर २०३० सम्ममा नेपालीको प्रतिब्यक्ति आय २५०० डलर पुर्याउने लक्ष्य, ३ नं. प्रदेशमा देशकै धेरै उद्योग
on: १४ चैत्र २०७४, बुधबार १५:५९ मुख्य खबर, समाचार
२०३० सम्ममा नेपालीको प्रतिब्यक्ति आय २५०० डलर पुर्याउने लक्ष्य, ३ नं. प्रदेशमा देशकै धेरै उद्योग
चैत १४, हेटौंडा । नेपाल राष्ट्र बैङ्क अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपालीको प्रतिब्यक्ति आय ८ सय ६२ यूएस डलर पुगेको बताएका छन् । मङ्गलवार हेटौंडामा आयोजित एक कार्यक्रममा निर्देशक थापाले सन् २०३० सम्ममा प्रतिब्यक्ति आय दुई हजार पाँच सय डलर पु¥याइने बताए ।
सन् २०१४ मा नेपालको समग्र प्रतिब्यक्ति आय ७ सय १८ डलर रहेको अवस्थामा प्रदेश नं ३ को प्रतिब्यक्ति आय एक हजार ९३ डलर रहेको पनि निर्देशक थापाले जानकारी दिएका छन् । प्रदेश नं ३ मा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २१ प्रतिशत अर्थात ५५ लाख जनसङ्ख्या बसोबास गरिरहेका छन् । सन् २०१४ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल राष्ट्रिय आयमा ३ नं प्रदेशको योगदान ३१ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।
नेपालको सबैभन्दा बढी उद्योग सञ्चालन भएको प्रदेश पनि ३ नं नै हो । नेपालको उत्पादित विद्युतको ३६ प्रतिशत ३ नं प्रदेशको रहेको राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ । ३ नं प्रदेशमा दुई हजार तीन सय मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको निर्देशक थापाले बताए । बैङ्किङ क्षेत्रको निक्षेप सङ्कलनमा ३ नं प्रदेशको योगदान ७२ प्रतिशत र कर्जा परिचालन ५७ प्रतिशत रहेको छ । कुल राजस्व सङ्कलनमा ३ नं प्रदेशको योगदान ५० प्रतिशत रहेको छ । नेपालको आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसङ्ख्याको प्रतिशत ३९ दशमलव ९ रहेको र ३ नं प्रदेशको यो तथ्याङ्क ४२ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ ।
नेपालको कुल सडक ७० हजार चार सय ७४ किमि रहेकोमा ३ नं प्रदेशमा मात्र १७ हजार दुई सय २२ किमि सडक रहेको छ । नेपालमा हाल (२०७४ माघसम्म) ९ सय २७ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेकोमा ३ नं प्रदेशमा मात्र ३ सय ३६ मेगावाट उत्पादन भएको छ ।
कृषि क्षेत्रको ४ दशमलव ७, गैर कृषि क्षेत्रको ८ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ भने गरिबी दर १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको निर्देशक थापाले बताए ।
राजस्व परिचालनतर्फ चालू आवको चैत ४ गतेसम्ममा ४ सय ४० दशमलव २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको निर्देशक थापाले जानकारी दिए । विगत एक वर्षदेखि मुद्रास्फीति न्यून रहेको बताउँदै निर्देशक थापाले आव २०७३÷७४ को प्रथम सात महीनामा औसत मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको बताए । कुल गार्हस्थ्य बचत करीव १० प्रतिशत रहेको थापाले बताए ।